Momba anay - Jiangyin Lonovae Tenology Co., Ltd.
Jiangyin Lonovae Tenology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2015, tao amin'ny tanànan'i Jiangyin, Sina, nibodo faritra mirefy 3.000 metatra toradroa, mpiasa maherin'ny 100, manam-pahaizana manokana momba ny famokarana plastika, mifantoka amin'ny vahaolana azo alaina azo alaina amin'ny indostria isan-karazany. Ny vokatra lehibe:
Fonosana plastika azo potika plastika, Container Bulk Collapsibale, Crates azo, Panel tantely PP
Miaraka amin'ny asanay tato anatin'ny taona vitsy lasa izay, Lonovae dia afaka nanampy orinasa marobe hahita vahaolana maharitra sy milamina amin'ny tontolo iainana ho an'ny karazana fampiharana amin'ny alàlan'ny famatsiana ny fonosana azo entina miverina.
Ary manomboka ny asa fikarakarana manokana sy fikarakarana tokantrano toy ny lamba famaohana landy, lamba latabatra sns. Ny tanjonay dia ny hitondra ny traikefa momba ny fahasalamana, fahadiovana ary fampiononana.
NY VISIONA & MISIONON-tsika
Mampiasa ny haitao mifanaraka amin'ny filan'ny taona,
Manampy ny mpanjifa hahita vahaolana maharitra sy milamina amin'ny tontolo iainana,
Fanatsarana ny fanatsarana ny tontolo iainana sy ny andrasan'ny mpampiasa;
Ho marika marim-pototra sy azo antoka amin'ny tsena
BUSINESS vaovao momba ny fikarakarana manokana sy trano
Vokatra tsy tenona:
Lonovae dia natao indrindra ho an'ny famokarana pp tsy tenona lamba. Lamba landihazo azo atsipy, servieta famatrarana, lamba famaohana taolana kamo sy lamba lambam-panaka sns Azo antoka, tsara kalitao.
Manana famokarana ampy hamaliana ny fepetra takiana izahay.
Fampiharana: indostrian'ny hatsaran-tarehy, tokantrano sns.
Izahay dia manana dingana vita amin'ny fenitra hitantanana ny famokarana, madio, fahombiazana avo lenta, manana tsipika mandroso 2 izahay.
“Frank, manana sakafo vaovao aho momba ny tabilao sela PP. Ankehitriny manana ekipa tsara kokoa ianao. Jay sy Jeffery dia tena matihanina sy mahay. Mahatakatra ny fangatahana sy ny valiny ara-potoana izy ireo ary amin'ny fomba hentitra. Miarahaba anao! Mazava ho azy fa tena matihanina ihany koa ianao ary mahafantatra tsara ny vokatrao sy ny tsenany. "- Mana
“Sophia, tena mankasitraka azy izahay noho ny serivisy matihanina sy mahafinaritra an'i Lonovae. Manantena izahay fa afaka miara-miasa tsara kokoa sy tsara kokoa. ”- Brett
“Misaotra anao tamin'ny ezaka mafy nataonao sy ny faharetanao tamin'ny fiaraha-miasanay.” - Martha